Tag: famolavolana ux | Martech Zone
Tag: famolavolana ux
Tena nankafizinay ny fandaharana teo aloha teo amin'ny Martech saingy fantatray fa toa antitra io. Raha niasa izy io dia tsy nahazo mpitsidika vaovao toy ny taloha intsony. Mino aho fa tonga tao amin'ilay tranonkala ny olona, ​​nihevitra fa somary taraiky ao aoriana ny endriny - ary nanao ny fiheverana izy ireo fa mety ho toy izany koa ny atiny. Raha tsorina dia niteraka zazakely ratsy tarehy izahay. Tianay io zazakely io, niasa mafy izahay